Uluhlu oluthi "KuMtyholi" lwandisa isakhelo | Ndisuka mac
Uthotho "Ngaphakathi noMtyholi" lwandisa isakhelo sayo
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo besithethile ngothotho olulandelayo oluzayo kwiApple TV +, KuMtyholi, uthotho oluza kubakho kumdlali weqonga uRay Liotta. Ngokwengxelo ye Hollywood Hollywood, Abalingisi bale mveliso intsha bandisiwe kunye nabadlali uGreg Kinnear noSepideh Moafi.
Ukongeza kuRay Liotta, kunye nezongezo ezintsha, la manqaku aza kudlala abadlali uTaron Egerton noPaul Walter Hauser. KuMtyholi isekwe kwinoveli engaziwayo ebhalwe nguJames Keene noHillel Levin kwaye isibonisa ibali lombulali obulalayo kwaye isivumelwano esiyingozi asenzayo ukuhlawulela.
Ukunye noMtyholi ijolise kuJimmy Keene (Egerton), unyana wephoyisa laseChicago (uRay Liotta) ophela ejele. Kwiinyanga ezimbalwa egwetyiwe, igqwetha elalichophele ityala lakhe laya kuJimmy ngesivumelwano: Ukuba unokufumana elinye ibanjwa, orhanelwa njengombulali, vuma, ungahamba ukhululeke. Olu luhlu luza kuphonononga ubudlelwane obusondeleyo phakathi kwamabanjwa amabini kunye nobude abaya kubo ukufuna inkululeko, ukuba ukuxolelwa okuyinyani kunokwenzeka.
UGreg Kinnear (otyunjwe njengomdlali obalaseleyo ekuxhaseni ifilimu Kungcono ... akunakwenzeka, iphumelele iBhaso labaGcisa beScreen seGcisa eliXhasa iMiboniso bhanya-bhanya Mncinci uMiss Shunshine) Uya kudlala uBrian Miller, umphandi oyintloko kwiOfisi kaSheriff yeVermillion.
USepideh Moafi (Uye wavela kwiziqendu esinye seBlue Bloods, uMongikazi uJackie, Umfazi olungileyo, uLuhlu oluMnyama) udlala uLauren McCauley, iarhente yeFBI.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Uthotho "Ngaphakathi noMtyholi" lwandisa isakhelo sayo
Inguqulelo yesibini ye-beta ye-MacOS Big Sur 11.4 yabaphuhlisi